"अचम्म....र विचित्र...." कृति भित्र मोदनाथ प्रश्रित | samakalinsahitya.com
- कृष्ण सुवेदी निराकार
मोदनाथ प्रश्रितज्यूलाई मैले नजिकबाट शिक्षामन्त्री हुनुभएको वेला २०५१ माघ महिनामा मेची व. क्याम्पसको प्राङ्गणमा महानन्द पुरस्कार वितरण समारोहमा देखेको थिए“ । अनि उहा“को खिरिलो भाषण पनि सुनेको थिए“ ।
फाट्ट–फुट्ट टेलिभिजनमा देखेको वाहेक, उहा“का लेख–रचनाहरूमा भेटेको बाहेक साक्षात्कार हुने मौका भने पाएको थिइ“न । संयोगवस २०६७ पुस २० गते उहा“को घरैमा पुगें । त्यस दिन मैले आफ्नो अहोभाग्य सम्झिए“ । मोदनाथ प्रश्रितज्यूको घरभित्र साहित्यिक संसार रहेछ । घरभित्रै पुस्तकालय, घरभित्रै सङ्ग्राहालय, घरभित्रै अभिलेखालय । के छैन घरभित्र एउटा साहित्यकारका लागि । तर विलासिताका वस्तुहरूभने त्यति देखिन मैले ।
मलाई मोदनाथ प्रश्रितज्यूले त्यसदिन झापाली साहित्यिक गतिविधि वारे सोध्नुभयो, जुही विशेषाङ्कबारे सोध्नु भयो । करिव एक घण्टा जति उहा“स“ग कुराकानी पश्चात् हामी दुवै थानकोटदेखि कलङ्कीसम्म माइक्रोबसमा कुरा गर्दै–गर्दै आयौं । उहा“ रत्नपार्क तिर लाग्नु भयो, म चावहिल तर्फ लागें । माइक्रोबस भित्र उहा“ले मलाई ‘यो अचम्मको नेपाल, विचित्रको संसार’ नामक आफ्नो कृति दिंदै भन्नु भयो– “निराकारजी तपाईले यी यो किताबको बारेमा लेख्नुस् है ! यस्को बारेमा कसैले लेखेका छैनन्, यो नौलो पनि हुन्छ ।” म खुसी भए“ र गाडीमा यो कृति हेर्दै–हेर्दै आए“ ।
रङ्गीन आवरण भएको १÷८ साइजको पुस्तक जसको पहिलो चित्र डामिनिकन गणराज्यको सन्तो डेमिडगो स्थित एउटा अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट जन्मिएका साझा मुटु भएका, छाती जोडिएका दुई बच्चाको फोटो, त्यसैगरी दोस्रो फोटो – माहुरी नै माहुरीले कपडा लगाएको जस्तो देखिने चिनीया“ नागरिक चुआन्क्वानको फोटो राखिएको, तेस्रो फोटो–सन् २००७ मा बेलायतको ब्रिगटोनमा आयोजित ’दाह्री – जु“गा प्रतियोगिताका एक सहभागी – जस्को ६ वटा हा“गा फाटिएका – मिलाएर वाटीएको दाह्री जुङ्गा सहितको ह्याट लगाएको व्यक्तिको फोटो राखिएको छ भने अन्तिम चित्रमा आफ्नो शरीरमा एक हज्जार नौसय तीन ठाउ“मा छेडेर विश्वकीर्तिमान कायम गरेकी एलाइन डेमिड्सन नाम गरेकी हेर्दा देवी(काली) जस्तो देखिने जिव्रो सहित (औंलै छिर्नेगरीे) छेडेकी महिलाको आश्चर्यजनक फोटो राखिएको छ । कभरको पछाडीपट्टी पनि त्यस्तै आश्चर्यजनक पा“च वटा चित्रहरू समेटिएका छन् ।
विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित, सङ्कलन ÷ लेखन ÷ सम्पादन– मोदनाथ प्रश्रितद्वारा सम्पादित यस पुस्तक १४३ पृष्ठमा रु.१००÷– मूल्य बोकेर २०६६ मङ्गसिरमा पहिलोपल्ट जन्मिएको रहेछ ।
‘मलाई लागेको कुत्कुती तपाईलाई पनि सर्ला कि ?’ शिर्षकमा सम्पादक प्रश्रितज्यूले आफ्ना (सम्पादकीय) कुराहरू राख्नु भएको छ पृष्ठ तीन र चारमा । नया“ कुरा पत्र – पत्रिकामा पढेपछि, असामान्य कुराहरूलाई चिनो लगाउने, टिपोट गर्ने र फाइलमा काटेर राख्ने आफ्नो सानै देखिको लहडलाई ३०० जति सामग्रीहरू यस कृतिभित्र संकलन गरेको कुरा प्रश्रितज्यूले लेख्नु भएको छ आफ्ना कुरामा ।
पुस्तक भित्र समाविष्ट चित्रहरू ‘सर्पलाई अनुहार टोकाउने कला’ देखि ‘विना अक्सिजन सफल भयो नवरात्र समाधि’ सम्म जम्मा २१२ वटा चित्र सहितको छोटकरी विवरण समाविष्ट छन् । त्यस्तै चित्र विनाका पनि ९५ वटा शिर्षकका घटनाहरू समेटिएका छन् ।
यस पुस्तकभित्र अचम्मको नेपाल र विचित्रको संसार गरी २ भागमा घटेका घटनाहरू समावेश छन् ।
विश्वका अन्य देशहरूमा विचित्रमय कुरा र आफ्नो देशको आश्चर्य जनक असामान्य घटनालाई समावेश गरिएको छ । यस पुस्तकमा अचम्मको नेपाल भित्र नेपालमा पनि विभिन्न रोचक घटनाहरू छन् भन्नेकुरा देखाइएको छ । नेपालभित्र भए–घटेका घटनाहरूलाई टपक्क टिपेर मिठासपूर्ण शब्दसहित सचित्र घटना समावेश गर्नु भएको छ प्रश्रितज्यूले । नेपाल भित्रका आश्चर्यजनक – रोचक कुराहरू अन्तरगत– १०२ वटा चित्रसहितका विवरणहरू समेटिएका छन् भने ६३ वटा विना चित्रका तर महत्वपूर्ण वेला–वेलाका घटना विवरणहरू पनि समेिटएका छन् ।
अचम्मको नेपालभित्र प्रश्रितज्यूले जुन विवरणहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ ती सा“च्चैनै अचम्मका छन् । कस्को घरमा कति किलोको खसी छ र कति दाममा विक्री भयो देखि कस्का गाईले धेरै दुध दियो सम्मका कुराहरू, गाडी हा“क्ने ७ वर्षे वालकको नामदेखि सवैभन्दा वुढो व्यक्ति खनारका वीरनारायण माझीसम्मको कुरा सङ्कलन गर्नु भएको छ । कुन महिलाको दाह्री जु“गा छन् देखि कस्का लामा दाह्री–जु“गा छन् सम्मका टिपोट गर्न छुटाउनु भएको छैन । त्यतिमात्र नभएर विश्वमा विभिन्न घटना, आश्चर्य लाग्ने कुराहरू पनि समाविष्ट छन् यस पुस्तक भित्र । यो पुस्तक पढीसक्दा संसार सा“च्चै नै विचित्रको रहेछ भन्ने लाग्छ । ११० वटा विचित्रका चित्रसहितका घटना र २२ वटा विना चित्रका घटनाहरू समेट्नु भएको छ यस पुस्तकभित्र ।
समग्रमा यस पुस्तकभित्र समेटिएका बिषयवस्तुले सामान्य ज्ञान बारे रुची राख्ने जो कोहीलाई पनि दरिलो खोराक प्रदान गरेको छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरूलाई पनि यो पुस्तक निक्कै उपयोगी छ । विश्वका रोचक घटना जान्न–बुझ्न चाहनेलाई त यो पुस्तक झनै सङ्ग्रहणीय छ ।
अन्तमा महाकवि मोदनाथ प्रश्रितज्यूको सुस्वास्थ्य, दिर्घायू एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित उहा“का अझै धेरै कृतिहरू पढ्न पाउ“ ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : बिहीबार, 11 कार्तिक, 2073